(38) Single Point Focusing ဓါတ်ပုံပညာရပ်ဆိုင်ရာ မှတ်စု(၃၈)
Single Point Focusing နှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိသင့် သည့် အချက်များ။
( A Brief Note on Single Point Focusing )
Single Point Focus သည် ဓါတ်ပုံကို အလေး အနက် ရိုက်ကူးသူများ အတော် အသုံးများသည့် နည်း တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် Portrait ရိုက်သူများ အနေနှင့် Subject ၏ ပြ လိုသော အပိုင်းကလေး များကို အသေးစိတ် ပြတ်သား စေရန် အလေးပေး အသုံးပြု သည့် Focusing လုပ်နည်း ဟု ဆို ရပါ မည်။
ရှေ့ တွင် မည်သည် အရာ ၀ထ္ထု များ ရှိနေစေ ကာမူ အဆိုပါ အရာ ၀ထ္ထု များ အကြား မှ ဖေါက် ကာ ယင်းနောက် ရှိ မိမိ ရိုက် လိုသော Subject ကို Focus ဖမ်းသည့် နည်း လည်း ဖြစ်ပါသည်။
Model ပုံ ကောင်းများကို အထူးပြု ရိုက်ကူးလေ့ရှိသည့် မိတ်ဆွေ တစ်ဦးက “ ကျွန်တော် ကတော့ Subject ကို ရိုက်တိုင်း Single Point Focus နဲ့ သာ ရိုက်ပြီး ဘာကိုမှ အထူးပြုပြီး ရိုက်ဘို့ မလိုတဲ့ ရှုခင်းတွေ ရိုက်မှ သာ Auto Area -AF မှာထားရိုက် ပါတယ် “ ဟု ပြောခဲ့ဘူးပါသည်။
Single Point Focusing သည်ခက်ခဲ လွန်းလှသည့် ကိစ္စ ရပ် တော့ မဟုတ်ပါ။ သို့ ရာတွင် လိုရင်း မရောက် ဖြစ်တတ် သည့် အချက်များ ရှိပါသည်။ စင်စစ် အားဖြင့် ကျွန်တော် ကိုယ်နှိုက် ကလည်း ယခင်က Single Point Focusing ကို အသုံးပြုမှု နည်းခဲ့ပါသည်။ အလေ့အကျင့် နည်း သည့်အတွက် ၄င်း၏ အထာ နှင့် သဘာဝကို အသိလည်း နည်း ပါသည်။
ဤ မှတ်စုသည် ပညာရှင် အဖြစ်ရေးသားသည့် ဆောင်းပါး မဟုတ်ဘဲ ယင်း၏ ထိရောက်မှု နှင့် သဘော သဘာဝ ၏သေးစိတ် ကို သိလို သဖြင့် လှန်လှော ရှာဖွေ လေ့လာ ရင်း၊ စမ်းသပ် ရိုက်ကူးရင်း ကျွန်တော် တွေ့သမျှ လေးများကို မိမိ ကဲ့ လေ့ လာ သူများ သိ ရှိနိုင်ကြစေရန် အတွက် ပြန်လည် မျှဝေ ပေးသည့် မှတ်စု သာ ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြအပ်ပါ သည်။
Single Point Focusing
အထက် ပါ ကျား ပုံ ကိုရိုက်ရာ တွင် ရှေ့ တွင် ကွယ် နေသည့် ခြုံ များ သစ်ကိုင်းများကို ဖေါက် ထွင်းကာ Single Focus Point တစ်ခု ထည်း ဖြင့် မျက်လုံကို ထောက် ကာ ရိုက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျား ရှေ့ ရှိ ခြုံ များ သစ်ကိုင်းများ ၀ါး နေကာ မျက် ကျား လုံး ပြတ်သားနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤ ကဲ့ သို့ Single Focus Point ဖြင့် Focus မဖမ်းဘဲ Auto ဖြင့် Focus ဖမ်းပါက ကင်မရာ သည် ကျား မျက်လုံးကို Focus ဖမ်းမည့် အစား ရှေ့ ပိုင်းရှိ ခြုံ များ သစ်ကိုင်းများ ကိုသာ ဖမ်း မည် ဖြစ်၍ ခြုံ များ သစ်ကိုင်းများ ပြတ်သား ကာ ကျား မျက် လုံး ၀ါး နေပေလိမ့် မည်။
အထက်ပါ Single Point ဖြင့် ဖမ်း ကာ Eagle ကို ရိုက်သည့် နည်း အများစု မှာ AF (C) Continuous Tracking ရိုက်ရာ တွင် အသုံး များပါသည်။
အထက်ပါ ပုံ မှာ မိမိ ပြတ်သား စေလိုသည့် နေရာ ကွက်ကွက် ကလေးကို သာ Single focus Point ဖမ်းကာ Depth of Field ပါးပါး လေး ဖြင့် ပြထား ခြင်း ဖြစ် ပါသည်။
အထက်ပါ ပုံ မှာ လည်း မိမိ ပြတ်သား စေလိုသည့် သေနပ် ပြောင်း ဖျား လေး ကို သာ Single focus Point ဖမ်းကာ Depth of Field ပါးပါး လေး ဖြင့် ပြထား ခြင်း ဖြစ် ပါသည်။
အထက်ပါ ပုံ မှာ စက်ဝိုင်း ကွင်း ကလေး ကို ဖေါက် ကာ နောက် ရှိ မီးရထား သံလမ်း ကို Single Point focusing ဖြင့် ဖမ်း ထားခြင်း ဖြစ် ပါသည်။ ထို့ ကြောင့် လက် နှင့် ကိုင်ထားသည့် စက် ၀ိုင်းကွင်း ကလေး ၀ါး နေကာ အဓိက ပြ လိုသည့် စက်ဝိုင်းကွင်း ကလေး နောက်ရှိ သံလမ်း ပြတ်သားနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Focus Point အရွေး မှား သည့် ကိုယ် တွေ့ ဖြစ်ရပ် တစ်ခု။
Single Point Focusing မသုံး လိုက် မိသည့် အတွက် မဖြစ် သင့် သော အမှား တစ်ခု ကျွန်တော် ကိုယ် တိုင် ဖြစ်ခဲ့ ဘူးပါသည်။
ကျွန်တော် Sydney, Darling Harbour က တံတားပေါ်တွင် ဇနီး နှင့် သမီး အား အမှတ်တရ ပုံ ရိုက်ပေးရာ Auto Area -AF နဲ့ ရိုက် လိုက် သည့် အတွက် ကင်မရာ က လူ ကို Focus မဖြတ်ဘဲ ထင်ရှားသည့် နောက်ခံ ကိုသာ Focus ဖြတ်လိုက်သောကြောင့် လူ တွေ ၀ါး နေကာ နောက်ခံ ရှု ခင်း ( Background ) သာ ပြတ်သားနေသည့် အဖြစ်နဲ့ ကြုံ ဘူးပါသည်။ အကယ်၍ Single Point နဲ့ လူ ကို Focus ဖြတ် မည် ဆိုပါက ဇနီး နဲ့ သမီး ပုံ ပြတ် သားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Location - Darling Harbour Bridge, Sydney, Australia. Date shot -3July 2013
အမှန် မှာ အောက်ပါပုံ တွင် Focus လုပ် လိုသည် က လူမျက် နှာ များ ဖြစ်သည့် A နေရာ ဖြစ်သည်။ သို့ ရာ တွင် ကင်မရာ Firmware က လူထက် ပို၍ ထင်ရှား သော နောက်ကြော ရှိ B နေရာ ကို Focus ဖမ်း လိုက်သည့် အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
ပြန်ရိုက် ၍ ရသည့် မှတ်တမ်း ပုံ များ ဤ ကဲ့ သို့ မှားသွား လျှင် မထောင်းတာ လှ သော်လည်း ပြန် ရိုက်၍ မရတော့ နိုင်သည့် ပုံ မျိုး ဤ ကဲ့ သို့ မှား သွား မည်ဆိုပါက အစား ပြန် မရ နိုင်တော့ မည် မဟုတ်ပါ။
Single Point Focus ကို စတင် သုံးစဉ်က Single Point Focus ကျရောက်သည့် နေရာ မဟုတ်သည့် အခြားသော နေရာ များ ၏ ပြတ်သား မှု များ ရှိ ပါ့ မလား လို့ စိတ် ပူ မိခဲ့ ပါသည်။ Single Point Focus နေရာ သာလျှင် ပြတ်သားနေပြီး ကျန်သောအရာ များ ၏ ပြတ်သား မှု လျှော့ကျ သွားးလေ မလား ဆိုသော စိုးရိမ် မှု ဖြစ်မိပါသည်။
သို့ နှင့် ရှာဖွေ ဖတ်ရှု ကြည့်ရာတွင် ဆောင်းပါး တစ်ခု တွင် ဓါတ်ပုံ သမား တစ်ဦးက “ သူသည် လူ သုံး ဦး ရင်ဘောင်တန်း ကာ ယှဉ် ၍ ရပ် နေရာတွင် အလယ် က လူ ကို Single Point Focusing လုပ်မည် ဖြစ် ကြောင်း၊ ဤ ကဲ့ သို့ လုပ်ရာ တွင် အဆိုပါ လူ ၏ ဘေး ဘယ်-ညာ ရှိ လူ နှစ်ဦး Focus မှ လွတ်ကာ မပြတ်မသား ဖြစ်လေ မည် လား” ဟူ သော မေးခွန်းကို မေး ခဲ့သည်ကို တွေ့ ခဲ့ ရပါသည်။
အဆိုပါ မေးခွန်းကို ၀ါရင့် ဓါတ်ပုံ ဆရာ တစ်ဦးက “ Focus doesn't fall off side to side. It only falls off front to back.” Focus ၏ သက်ရောက် မှုသည် ဘေး တိုက် သက်ရောက်ခြင်း မရှိဘဲ ရှေ့ နှင့် နောက် တို့ တွင်သာ သက်ရောက်မှု ရှိသည်ဟူ၍ ပြန်လည် ဖြေကြားသည့် စာပိုဒ်လေး တစ်ခု ကို ကံ အားလျှော်စွာ တွေ့ လိုက်မိပါသည်။
ထိုစဉ်တွင်မှ Focus Point သည် Plane of Focus ပေါ် သို့ ကျရာက် ရာတွင် ပြင်လိုက် တန်ဘိုးညီ ကျရောက်ပြီး ၊ Focus ထိရောက်မှု အနည်း အများ ( Fall off )သည် ရှေ့ ရောက်ခြင်း နောက် ရောက် ခြင်း တို့ ၏ အပေါ် တွင်သာ တည် နေသည် ဆိုသည့် အချက် ကို ပြန်သတိရမိပါသည်။
အောက်ပါ ပုံ မှာ Plane of Focus ( Red ) ပေါ် သို့ Focus ကျရောက်နေသည် ကို ပြသော ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အနီ ရောင် လိုင်း၏ ဘေး ဘယ်-ညာ နေရာ များ Focus ပြတ်သားပါမည်။ အနီ ရောင် Plane of Focus ၏ ရှေ့ နှင့် နောက် တို့၏ ပြတ်သား မှု သည် Plane of Focus မှ နေ၍ ဝေး သွားသည့် အလျှောက် တဖြည်း ဖြည်း ၀ါးသွားပါမည်။
Camera တွင် Single Point Focus Mode ကို ရွေးချယ် ခြင်း။
Camera တွင် Auto Focus Mode များ ကို အောက် ပါအတိုင်းတွေ့ နိုင်ပါသည်။
ကင်မရာ က သူ လိုအပ်သည် ထင်သကဲ့ သို့ Focus Points များကို သုံးကာ Firmware က ဆုံးဖြတ် ပေး သည့် နေရာ ကို သူ့ သဘော အလျှောက် Focus ဖမ်းပါလိမ့် မည်။
ကင်မရာ ကြော ဘက်ရှိ Multi-Selector အ၀ိုင်း လေးကို နှိပ် ပြီး အထက် နမူ နာပါ အနီ ကွက် လေး အား အထက် အောက် ၊ ဘေး ဘယ်-ညာ လိုသည့် နေရာ သို့ ရွှေ့ ကာ မိမိ လို သည့် နေရာ ကို တိကျစွာ Focus ဖမ်း နိုင်ပါသည်။
အောက်ပါ နမူ နာပုံ ကို ကြည့်ပါရန်။
Single Point Focus ကို အောက်ပါ နမူနာ ပုံ အတိုင်း Multi-Selector အား နှိပ်ကာ အထက်-အောက် ဘေး ဘယ်-ညာ သို့ ရွှေ့ ကာ မိမိ လို အပ် သည့် နေရာ သို့ ပို့ နိုင် ပါသည်။ အောက်ပါ နမူနာ ပုံ တွင်မူ Subject ၏ မျက်စေ့ နေရာ သို့ ပို့ ထားပါ သည်။
အပြည့် အစုံ ကို ပူးတွဲ ပါ Link ဖြစ်သည့် Camera Setting Part (1) တွင် လေ့ လာ နိုင်ပါသည်။
Single Point Focus နှင့် ပြတ်သား မှု ဧရိယာ ( Depth of Field )
Single Point Focus သည် Plane of Focus (PoF) ပေါ် ရှိ မိမိ အလေး အနက် ပြလိုသည့် နေရာ ကို အတိအကျ Focus ဖြတ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အထက်တွင် ဖေါ် ပြ ခဲ့ သည့်အတိုင်း မိမိ Single Point Focus ဖြင့် ဖမ်း ထားသည့် နေရာ ၏ ဘေး ဘယ်-ညာ နေရာ များရှိ Subject များ ပြတ်သား ပါမည်။
Subject ၏ရှေ့ နှင့် နောက် တို့ တွင် မည် မျှ ပြတ် သား မည် ဆိုသည်မှာ မူ Depth of Field ပေါ် တွင် တည်ပါမည်။
Depth of Field ၏ အကျိုး သက်ရောက်မှု။
Depth of Field နမူနာပြ ပုံ
အောက်ပါ Diagram ကို ကြည့် ပါက အနီရောင် လိုင်း သည် Focus ဖမ်းထား သည့် ကဒ်ပြား နေရာ နှင့် ဘေးဘယ်-ညာ ရင် ဘောင်တန်း နေရာ များ ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အနီရောင် နေရာ အားလုံး ပြတ်သားပါမည်။
အပြာရောင် လိုင်းသည် Focus ဖမ်း ထားသည့် နေရာ ၏ ရှေ့ နှင့် နောက် နေရာ များ ဖြစ်ပါသည်။ Focus ဖမ်းထားသည့် အနီရောင် လိုင်း မှ ဝေးသွားသည့် အလျှောက် ပြတ်သား မှု လျှော့ ကျ သွား သည် ကို တွေ့ နိုင်ပါသည်။
၏ အောက် ပါပုံ ကို ကြည့် လျှင် ပို ရှင်း ပါမည်။ Single Point Focus ကို အနီရောင် လေးထောင့် ကွက် ကလေး ဖြင့် ဖမ်း လားပါသည်။ အဆိုပါ Single Point Focus ကို အနီရောင် လေးထောင့် ကွက် ကလေး ၏ ဘေး ဘယ်-ညာ အနီရောင် မျှား တစ်လျှောက် နေရာများ ရှိ Subject များ အားလုံး ပြတ် သားနေသည်ကို တွေ့ ရပါမည်။
Single Point Focus ကို အနီရောင် လေးထောင့် ကွက် ကလေး ၏ ရှေ့ နှင့် နောက် နေရာ များ မည်မျှ ပြတ် သား မည် ဆိုသည်မှာ မူ Depth of field အထူ အပါး နှင့် ဆိုင်သည့် Setting ပေါ် မူတည် ပါမည်။
အောက် ပါ နမူနာ ပုံ သည် ယေဘူယျ အားဖြင့် Depth of Field ကို အကျိုး သက်ရောက် စေသည့်, Aperture, Focus Distance, Focal length စသည့် အချက် များ အရ Plane of Focus ၏ ရှေ့ နှင့် နောက် တို့တွင် ပြတ်သား မှု ဧရိယာ မည်မျှ ရှိ လာ မည် ကို ပြသည့် Diagram ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ ။ မြေ ပြင်ပေါ် တွင် အနီရောင် ချယ် ထားသည့် နေရာ များသည် ပြတ်သားသည့် Depth of Field ဧရိယာ များ ဖြစ်ပါသည်။
Single Point Focusing ဖြင့် ရိုက်ထားသည့် နမူနာ ပုံများ။
အောက်ပါ ပုံ များ မှာ Single Point Focusing ( လေး ထောင့် ကွက် ကလေး ) ဖမ်း ထားသည့် နေရာ များကို နမူနာ ပြထားသည့် ပုံ များ ဖြစ်ကြပါသည်။
အဆိုပါ လေး ထောင့် ကွက် ကလေး ၏ ဘေး ဘယ်- ညာ ရင်ဘောင် တန်း နေရာ များ Focus ပြတ်သား မှု ရှိ နေပါမည်။
" Focus only falls off front to back.” ဆိုခဲ့သည့် အတိုင်း Single Point Focusing ဖမ်း ထားသည့် နေရာ ၏ ရှေ့ နှင့် နောက် နေရာ များ သည်သာ Depth of Field ပေါ် မူတည်ကာ ပြတ်သား မှု အနည်း အများ ဖြစ်ပေါ် လာပါမည်။
Single Point Focus ဖြတ်ထားသည့် နေရာ ကို ( နက်/နီ ) လေးထောင့် ကွက် ကလေး ဖြင့် ပြထားပါသည်။
Focus ၏ အကျိုး သက်ရောက် မှု သည် ဘေး တိုက် ပြင်ညီ တွင် အကျိုးသက်ရောက်မှု ပြောင်းလဲ မှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း မရှိဘဲ ရှေ့ ရောက် ခြင်း နောက် ရောက် ခြင်း တို့ အပေါ် တွင် သာ သက်ရောက် မှု ရှိသည် ကို ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Focus သည် Plane of Focus ပေါ်သို့ ကွက်တိ မကျဘဲ ရှေ့ တွင် ကျ ရောက် နေခြင်း Focal Plain ၏ နောက် သို့ ကျော် ကာ ကျ ရောက် ခြင်း များရှိ နေပါက အဆိုပါ ပုံ ၏ ပြတ်သား မှု သည် လျှော့ နည်း သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Plane of Focus ပေါ် သို့ ကွက်တိ ကျရောက်သော ပုံ သည် ကြည်လင် ပြတ်သားမည် ဖြစ်သည် ဟု အကြမ်း ဖျဉ်း ဆိုရပါမည်။ ချွင်းချက် အားဖြင့် Circle of Confusion ဟု ခေါ်သည့် ဧရိယာ အတွင်း ရှိ နေရာ များရှိ ပုံ ရိပ်များသည် လက်ခံ နိုင်လောက်သော ပြတ်သည့် အနေအထား တွင် ရှိနေပါသည်။
အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့ သည့် အတိုင်း Focus သည် Plane of Focus ၏ ရှေ့ တွင် ကျ ရောက်ခြင်း သို့ မဟုတ် နောက်သို့ ကျော်၍ ကျရောက်ခြင်း စသည် တို့ကြောင့် အပို အလို ဖြစ်မှု များလည်း ရှိသည်။ ယင်းကဲ့ သို့ အနည်းငယ် လွဲ၍ ကျစေကာမူ ထင်လာသည့် ပုံရိပ်သည် လူ၏ မျက်စေ့ဖြင့် ကြည့်ပါမူ ပြတ်သားသည်ဟု ထင်ရသည်။ သို့သော် အတိအကျ Focal Point အဖြစ်ကျရောက်သည့် ပုံ၏ ပြတ်သားမှု ထက်လျှော့ နေသည်။ ယင်းကို Circle of Confusion ဟု ခေါ်ပါသည်။ ပုံ တိုင်းသည် Plane of Focus ပေါ် သို့ Focus ကွတ်တိကျသည့် ပုံ အဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့ နှင့် Acceptable Sharpness ဟုခေါ်သည့် လက်ခံ နိုင်လောက်သည့် ပြတ်သား မှု ဆိုသည့် ဧရိယာ ကို သတ်မှတ် လာရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Circle of Confusion ၏စက်ဝိုင်း Diameter ကြီးလေလေ ပုံ၏ ပြတ်သားမှု ဧရိယာ လျှော့ နည်းလာလေ ဖြစ်သည်။ Circle of Confusion အတွင်းရှိပုံ မှာ လက်ခံ နိုင်လောက်သော ကြည့်လင် ပြတ်သားသည့် ပုံ ဟု ခေါ်ပါသည်။
အောက်ပါပုံ ကို ကြည့် လျှင် (အပေါ်ဆုံး) ပုံတွင် Focus သည် Focal Plain ၏ နောက် သို့ ကျော် ကျ နေသည့် ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ ( အလယ်) ပုံ တွင်မူ Focus သည် Focal Plain ပေါ်သို့ ကွက် တိကျ နေသည့် ပုံ ဖြစ်ပြီး ပုံ (အောက်ဆုံး)ပုံ မှာ မူ Focus သည် Focal Plain ၏ ရှေ့တွင် ကြို ၍ကျ နေသည့် ပုံ များကို နမူ နာ Diagram ဖြင့် ပြ ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (အလယ် ပုံ) ကဲ့ သို့ Focus သည် Focal Plain ပေါ်သို့ ကွက် တိ ကျ ရောက်သည့် ပုံ မှာ ပြတ် သား မှု အများ ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ မိမိ ထူးပြု ရိုက် လိုသည့်နေရာ သည် ပြင်ညီ တစ်ခု ထည်း မဟုတ်ဘဲ ရိုက် ကူး မည့် မျက်နှာပြင် Focal Plain ၏ နောက် ပိုင်း သို့ ရောက် နေလျှင် သော်လည်း ကောင်း ရှေ့ သို့ ရောက်နေလျှင် သော်လည်းကောင်း Main Subject ကြည် လင်ပြတ်သားရေး အတွက် မိမိ လိုသည့် နေရာ ကို Single Point Focusing ဖြင့် ဖမ်း ရတော့ မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤ ကဲ့ သို့ အခြေ အနေမျိုး တွင် Auto Area-Auto Focus ယူ ကာ ရိုက်ပါက ကင်မရာ နှင့် အနီးဆုံး နေရာ ကိုသာ Focus ဖြတ် ယူ ခြင်း ၊ သို့ မဟုတ် Main Subject ကိုကျော်ကာ နောက်ရှိ အရာ များသို့ Focus ဖမ်း ခြင်း နှင့့်် ကြုံ နိုင်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် မိမိ အထူးပြု ပြသ လိုသည့် Subject ၏ ပြတ်သားမှု မှာ ကျဆင်း သွား မည် ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ပါ ပုံ မှာ Focus Point သည် နှုတ် ခမ်း တွင် ကျ နေသည့် ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ ကြောင့် Focus Point ၏ နောက် သို့ ရောက်နေသည့် မျက် လုံး မှာ ၀ါး နေသည်ကို တွေ့ နိုင်ပါသည်။ နှုတ်ခမ်းကို အထူးပြု ရိုက် ကူးလိုလျှင် ဤ ပုံ သည် ကောင်းမွန် မှန်ကန် သည် ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့ သော် မျက်လုံးကို အထူးပြု ပြသ လိုသဖြင့် ရိုက်ကူး သည့် ပုံ ဖြစ်ပါမူ Focus လွဲ နေသည်ဟု ဆိုရပါမည်။
ISO 200,f2.0, Shutter Speed 1/1000.
အောက် ပါပုံ တွင် မူ Focus သည် Subject ၏ ဘယ် ပုခုံး ပေါ် တွင် ကျနေသဖြင့် ပုခုံး နှင့် ပုခုံး ထက်ရှိ အင်္ကျီ ပြတ်သားနေပြီး ပုခုံး၏ ရှေ့ တွင် ရှိ မျက် နှာ အနည်းငယ် ၀ါး နေသည်ကို တွေ့ နိုင်ပါသည်။
အထက်ပါ ပုံ မှာ Aperture အကျယ် ဖြစ်သည့် f-2.8 နှင့် ရိုက်သည့် အတွက် Subject ပု ခုံး ၏ ရှေ့ နှင့် နောက် နေရာ များ ပြတ်သား မှု လျှော့ နေသော်လည်း Aperture f-16 လောက် နှင့် သာ ရိုက်မည် ဆိုပါ က ယခု ပုံ တွင် ၀ါး နေသည့် နေရာ များ သည် ပြတ်သား သင့် သလောက် ပြတ် သား လာ မည် ဖြစ်ပါသည်။
အထက် တွင် နမူနာ ပုံ ပြ ထားသည့် ပုံ များ အားလုံးသည် Aperture ကျယ်ကျယ် နှင့် ရိုက်ထားသည့် ပုံ များ ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍သာ Aperture ကျဉ်းကျဉ်း နှင့် ရိုက် မည် ဆိုပါက Single Focus Point ၏ အပြင်ဘက် အနီးပတ်ဝန်းကျင် ရှေ့-နောက် ပြတ်သား မှု ဧရိယာ ထူ လာပါမည်။
အောက်ပါ ပုံ ကို ISO 100, f2.0, Shutter Speed 1/80 ဖြင့် Aperture အကျယ် ဖြင့် Focus Point ကို ခြေမ တွင် ယူ ကာ ရိုက် ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အောက်ပါ ပုံ မှာ ISO 100, f1.8, Shutter Speed 1/200 ဖြင့် မျက်တောင်ကို Focus Point ယူ ကာ ရိုက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အောက်ပါ ချယ်ရီပန်းကို ISO 100, f-2.2, Shutter Speed 1/4000 ဖြင့် ရှေ့တန်း ရှိ ပန်း အပွင့် တစ်ပွင့် ကို Focus ဖမ်း ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အထက်ပါ ပုံ များ အားလုံး မှာ မိမိ ပြသ လိုသည့် အရာ များကိုပေါ်လွင် စေပြီး ကျန် အထူးမပြုလိုသည့် အရာ များ ၀ါး နေ စေရန် Single Point Focusing ကို Aperture ကျယ်ကျယ် နှင့် တွဲ ကာ ရိုက်ကူး ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ပါ ပုံ မှာ မူ မျက်လုံးကို Single Point Focus ယူကာ ရိုက် ထားသည့် ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ ကြောင့် Aperture ကျယ်ကျယ် နှင့် ရိုက်ပါက ပုံ၏ အဓိက နေရာ ဖြစ်သော မျက်လုံး သည် ပြတ်သားနေရာ မျက် လုံး သည်၏ရှေ့ နှင့် နောက် ရှိ နေရာ အချို့ သည် မျက်လုံး ၏ ပြတ်သား မှု နှင့် နှိုင်းစာ လျှင် မဆို သလောက် ပြန်သားမှုလျှော့ နေမည် ဖြစ်ပါသည်။ Aperture ကျယ် သောကြာင့် Depth of Field ပါးလာလေ လေ Subject နှင့် ကင်မရာ အနီး အဝေး အကွာအဝေး အပေါ် မူတည် သည့် Focusing ပြတ်သားမှု ကွာခြား ခြင်း မှာ ပို ၍ သိသာ လာလေ ဖြစ်ပါ သည်။ မဆို သလောက်သော အနီး အဝေး ကွာခြားမှု သည်သည်ပင် ပုံ၏ ပြတ်သား မှု အပေါ် အကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိစေလာ ပါသည်။
အနီး ၊ အဝေး တူညီမှု မရှိ သည့် Subject များ အပေါ် ကျရောက်သော Focus.
အောက်ပါ နမူ နာ ပုံ များ မှာ မသိမသာ စောင်း နေသည့် ၊ တစ်နည်း အား ဖြင့် ကင်မရာ နှင့် Subject အနီး အဝေး မသိမသာလေးမျှသာ ကွာနေ သည့် Subject နှစ်ခု ကို Single Point Focus ဖြင့် Aperture အမျိုး မျိုး ပြောင်းကာ ရိုက် ထားသည့် ပုံ များ ဖြစ် ပါသည်။ အဆိုပါ ပုံ များကို ISO-200, Nikon 50 mm, f-1.4 Lens, Aperture Priority ဖြင့် ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Single Point Focus လုပ်ထားသည့်် နေရာ ကို အနီရောင်ဖြင့် Single Point Focus ဟုရေး ထားပါသည်။
အထက်ပါ ပုံ မှာ ခပ်စောင်းစောင်း ဖြစ်နေသည့် သော့ ( Lock) နှစ်လုံး အနက် နောက် မှ သော့ ကို Single Point Focus ဖြတ်ထားကာ Aperture f-1.4 ဖြင့် ရိုက်ထားသည့် ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ ကြည့်သူ၏ ဘယ်ဘက်ရှိသော့သည် Focus ဖမ်းထားသည့် ညာဘက်ရှိ သော့ထက် ကင်မရာ နှင့် မသိမသာ လေး မျှသာ ပိုနီးပါ သည်။ ပုံ တွင်မူ အဆိုပါ မသိမသာ ကွာ နေသည့် ရှေ့ပိုင်းသို့ ရောက်နေသော ( Lock) သည် အနည်း ငယ် ၀ါးနေသည် ကို မြင်နိုင်ပါသည်။ ဤ အနေအထား မှာ “ Focus only falls off front to back.” ဆို သည် ပြသ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါ ပုံ မှာ ယင်း ပုံ ကို ပင် Aperture f-8 ရိုက် ကူး ရာ ၌ ရှေ့ တွင် ရှိသော့ ပို၍ ပြတ်သား လာသည့် ကို တွေ့ ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ပုံ သည်ပင် Aperture f-16 ဖြင့် ရိုက်သည့် အချိန်တွင် သော့ နှစ်လုံး စလုံး ပြတ် သား လာသည့် ကိုတွေ့ နိုင်ပါသည်။
၄င်းအပြင် လိုသည့် နေရာ ကို ရွေးကာ အတိအကျ Focus ယူ လိုလျှင် Single Point Focusing နည်းကို သုံးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ အား ဖြင့် မိမိ ရိုက် လိုသည့် Subject သည် မျက် ပင် ရှည် များ ၏နောက်တွင် ရှိနေသည် ဆိုပါစို့။ ဤ ကဲ့ သို့ အခြေ အနေ မျိုး တွင် Auto-Area Auto Focus ( Auto-Area AF ) ဖြင့် ရိုက် မည် ဆိုပါက ကင်မရာ သည် ၄င်း နှင့် အနီးဆုံး ဖြစ်သည့် Subject ရှေ့ ရှိ မျက် ပင် များကိုသာ Focus ဖြတ် မည် ဖြစ်သောကြောင့် ရှေ့ ရှိ မျက်ပင် ရှည် များ ပြတ်သားကာ နောက် ရှိ Subject သည် လိုအပ် သည့် အတိုင်း အတာ အထိ ပြတ်သား တော့ မည် မဟုတ်ပါ။
အထက်ပါအခြေ အနေမျိုး တွင် မျက်ပင် များ အကြား မှ နေ၍ ဖြတ်ကာ မိမိ ရိုက် လိုသည့် ငှက် များ ပြတ်သား အောင် Single Point Focusing ဖြင့် ထောက် ကာ ရိုက်ပါက အထက်ပုံ တွင် ပြ ထားသည့် အတိုင်း ကင်မရာ နှင့် အနီးဆုံး ဖြစ်သော ရှေ့ တွင် ရှိ မျက် ပင် များ ၀ါးသွားပြီး ယင်းနောက်ရှိ ငှက် ပြတ်သား နေပါလိမ့် မည်။
Portrait ရိုက် ရာတွင် လည်း Auto-Area AF ဖြင့် ကင်မရာ အလိုကျ Focusing ဖြင့် သာ ရိုက် မည် ဆိုပါက အသားပေး ရိုက်ကူး ရမည့် Subject ၏ မျက်လုံး နေရာ မှာ ပြတ်သား သင့် သလောက် ပြတ်သား လိမ့် မည် မဟုတ်ပါ။
သတိပြု ရမည့် အချက် တစ်ရပ်မှာ Single Point Focus သည် လိုရာ Subject ပေါ် မကျ ဘဲ ကြားထဲ ကျ နေခြင်း မျိုး ကြုံ ရ တတ် ခြင်း ဖြစ် ပါသည် ။
အာက်ပါ ပုံ ကို ကြည့် လျှင် Single Point Focus သည် လူ နှစ်ဦး ကို ကျော် ကာ ၄င်းတို့ ၏ အကြား မှ နောက်ရှိသစ်ပင်များပေါ်သို့ ကျ သွားသဖြင့် လူ နှစ် ဦး စလုံး ၀ါး နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ပါ ပုံ မူ Subject (၃) ခု ကို တစ်ပြေး ညီ ထည်း ထားကာ Aperture f-1.4 ဖြင့် Single point Focus ကို Main Subject အဖြစ်ထားသည့် အလယ် ရှိ စက္ကူ ဘူးပေါ် သို့ ထောက်ကာ ရိုက် ထားသည့် ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ Main Subject ၏ ဘေး ဘယ် ၊ ညာ ရှိ ပုံ များ ၏ ပြတ်သား မှု မှာ ထူးခြားစွာ စွာ ကွာ ခြား မှု မရှိ သည်ကို တွေ့ နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ ပုံ များကို ISO-200, Nikon 50mm, f-1.4 Lens, Aperture Priority ဖြင့် ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ပါပုံ မှာ အဆိုပါ တစ်ညီထည်း စီ ထားသည့် Subject (၃) ခု ကိုပင် Apertutre f-8 နှင့် ရိုက် ထားသည့် ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ သေချာစွာ ကြည့်လျှင် Subject (၃) ခု စလုံး မျှ ကာ အနည်းငယ် ပို၍ ပြတ်သားလာသည့်ကို တွေ့ ရပါသည်။
အောက်ပါ ပုံ မှာ အဆိုပါ တစ်ညီထည်း စီ ထားသည့် Subject (၃) ခု ကိုပင် ထပ်မံ ၍ Aperture f-16 နှင့် ရိုက် ထားသည့် ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ Subject (၃) ခု စလုံး မျှ တစွာ ပြတ်သားလာသည်ကို တွေ့ ရပါသည်။ အချုပ် အားဖြင့် ဆိုရပါလျှင် Focus ၏ ဘေး တိုက် အကျိုး သက် ရောက် မှု သည် ထူးခြား စွာ မရှိ ခြင်း ကို ပြ ခြင်း ပင် ဖြစ်ပါသည်။
“ Focus doesn't fall off side to side. It only falls off front to back.” ဆိုသည့် အချက် ကို ပြ သ ခြင်း ပင် ဖြစ်ပါသည်။
အောက် ပါ ပုံ များကို Nikon 50mm, f-1.8 ၏ Sweet Spot ကိုသိ နိုင်ရန်အတွက် ကင်မရာ အား Tripod ပေါ် တင်၍ Aperture အမျိုးမျိုး ပြောင်းကာ စမ်းသပ် ရိုက်ကူး ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပုံများကို စစ်ဆေးကြည့်ရာတွင် အလယ် အလတ် ( Mid-Range ) Aperture များတွင် ပုံ များသည် မတိမ်း မယိမ်း ဖြစ်နေကြသော်လည်း f-2.5 , f-7.1 ဖြင့် ရိုက် ထားသည့် ပုံ များမျာ အပြတ် သား ဆုံး ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ ရပါသည်။ ယခု ဥပမာ သည် Nikon 50mm, f-1.8 ၏ အမူ နာသာ ဖြစ်ပါသည်။ Lens တစ်ခု နှင့် တစ်ခု Sweet Spot များ ခြားနား နိုင်ပါသည်။ စမ်းသပ် ရိုက် ကူးမှ သာလျှင် သိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Soe Hlaing at 00:52
ar po 26 November 2017 at 19:21
မသိနားမလည်တာတွေ. အများကြီး သိခွင့်ရခဲ့တဲ့ အတွက် အများကြီး
(38) Single Point Focusing ...